हिन्दुराज्य पुनस्थापनामा एकजुट हौं! – Chakra Jwala
हिन्दुराज्य पुनस्थापनामा एकजुट हौं!
Posted on9Jul 2015 11 Feb 2017 by Chakra Bhandari
संविधानको मस्यौदा जनता समक्ष आउदैछ। आफ्ना सुझाव दिनको लागि १५ दिनको समय जनतालाई दिइने भएको छ। धर्मको बिषयमा कुनै सम्झौता नगरौं। नेपालमा ‘हिन्दुराज्य’ कायम हुनैपर्छ। ‘धर्मनिरपेक्षता’को बिरोध गरौं।
संसारमा कृश्चियन र मुस्लिम देश जति पनि हुन हुने, नेपाल ‘हिन्दुराज्य’ हुन किन नहुने? राज्यको धर्म हुनुहुन्न भन्ने बकबासको बिरोध गरौं!! ॐकार परिवार भित्रका हिन्दु, बौद्ध, किराँत धर्मको प्रबर्द्धन र रक्षाको निम्ति पनि सरकारले साथ दिनुपर्छ। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष लगायत हिन्दु धर्ममा रहेका बैज्ञानिक तथा अनुसन्धानात्मक बिषयको खोजी तथा प्रचारको निम्ति पनि सरकारले चासो दिनुपर्छ। संसारका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी लगायत ठाउँमा धार्मिक पर्यटनको प्रबर्द्धनको निम्ति सरकारले बिशेष चासो दिनुपर्छ।
नेपाललाई धर्म र बिज्ञानको केन्द्र बनाउनको निम्ति नेपाल ‘एकमात्र हिन्दुराज्य’ घोषणा गरिनुपर्दछ र सरकारले बिशेष चासो दिनुपर्छ। हाम्रा मौलिक रितिथिती, परम्परा, भेषभुषा र भाषाको रक्षाको आवश्यकता हो अहिले। हाम्रो देश र हाम्रा मौलिक धर्ममा अहिले चौतर्फी प्रहार भैरहेको छ। मौलिकतालाई मर्न दिनु हुँदैन। आयातीत कुरा धेरै दिन टिक्दैन।
धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलन २ को माग होईन भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। धर्म निरपेक्षताको बिषयमा जनमत संग्रह गरौं भन्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको मनमा चिसो पस्छ, धर्मका बारेमा जनमतसंग्रह गरौ भन्दा जुन चिसो उनीहरुको मनमा पस्छ नि हो त्यो चिसोले नि भन्छ उनीहरुले बनाउन लागेको धर्म निरपेक्षता गलत छ । त्यसैले धर्म निरपेक्षताको बिरोध गरौं। नेपालमा ‘हिन्दुराज्य’ पुनस्थापनाको निम्ति दबाब सिर्जना गरौं। अन्य धर्मावलम्बीले पनि टाढा टाढासम्मका छिमेकी हिन्दु हुनाले आफुहरु हिन्दुराज्य हुँदा नै बढी सुरक्षित छौं भनेका छन् किनभने कसैले प्रलोभन वा धम्काएर हिन्दु बन भनेका छैनन्।
Tagged: हिन्दुनेपाल पुनःस्थापना, DeclaredNepal Hindu nation
Next Post नर्बे पढ्न जान चाहनुहुन्छ?